काठमाडौं उपत्यकामा पुनः लकडाउन ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं उपत्यकामा पुनः लकडाउन ?
काठमाडाैँ : कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटै जिल्लामा पुनः बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा सम्बद्ध अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले सङ्क्रमण देखिएका स्थानीयवासीलाई अति जरुरी कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुभयो । अटेरका कारण सङ्क्रमण बढेको स्पष्ट पार्दै उनले स्थानीय तहले पनि निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने बताए ।, याे खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
सुरक्षा गस्तीमा गएका एक प्रहरी जवानको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु
आफ्नै आमालाई थुकेको अभियोगमा छोरा गिरफ्तार !!!